यी हुन् ‘हर्ट अट्याक’सँग जोडिएका १० खतरनाक लक्षण — Sanchar Kendra
सास फेर्नमा समस्या भएसँगै सासको कमि भएको महसुस भएमा हृदयघातको खतरा बढ्छ । यसका साथै केही व्यक्तिहरुमा हृदयघातभन्दा अगाडि आत्तिने, डायजेशन हुने, मुटु पोल्ने र पेट दुख्ने समस्याहरु पनि देखिन्छ ।
उक्त अनुसन्धानको क्रममा कफिले कसरी मुटुलाई स्वस्थ राख्छ ? कति कप कफी पिउनु स्वास्थ्यलाई फाइदाजनक छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको थियो । युकेको बायोबैंकमा रेकर्ड भएका ४ लाख ६० हजार व्यक्तिहरूमाथि गरिएको अनुसन्धानमा कफी पिउने र नपिउने व्यक्तिमा कफीको प्रभाव र नपिउने व्यक्तिको अवस्थाको बारेमा खुलासा गरिएको छ ।
विशेषज्ञका अनुसार एक दिनमा ३ कपभन्दा बढी कफी पिउँदा स्वास्थ्यका लागि बेफाइदाजनक मानिन्छ । कफीमा हुने क्याफिनले मस्तिष्कको स्नायु प्रणालीमा असर गर्छ । क्याफिनको सेवनले भोक कम लाग्ने, तौल घट्ने जस्ता समस्या पैदा गर्छ ।
क्याफिनले शारीरिक र मानसिक रुपमा उर्जावान बनाउँछ । जसले गर्दा धेरै काम गर्ने र आराम गर्ने बानीको बिकास हुँदै जान्छ । यसले गर्दा विस्तारै उच्च रक्तचापको समस्या देखा पर्छ । त्यसैले क्याफिनको सही मात्राले शरीरलाई फाइदा गर्छ ।